Poltava Ukrainian Medical & Stomatological Academy (UMDA or UMSA),LENA ngenye yezinto emanyuvesi ngobukhulu futhi engcono yokwelapha ezwe elaliyi-USSR.
Kusuka lapho, phezu 40,000 Odokotela onekhono kakhulu, ososayensi eyaziwa kahle, abacwaningi, umsebenzi wezempilo abahleli kusuka Ukraine, Russia, kwamanye amazwe aseYurophu, Asian, amazwe ase-Afrika nase-American asebethweswe iziqu UMDA.
Ukraine has a lot of beautiful benefits for foreign students. Okokuqala nje, Ukraine has the lowest tuition fees in Europe, but high quality of education
A best level High labayali professional, sikuhlomele kahle isifundo izakhiwo kanye izisekelo emitholampilo, eyingqayizivele encwadini izimali umtapo zesayensi, ukufinyelela i-Inthanethi, ingqalasizinda isakhula campus abafundi 'Ungubani nesithakazelo impicabadala yokuphila - ukufinyelela angu isayensi Labs, ithuba ukusebenza imishini unique, ithuba lokufunda zanamuhla ucwaningo. Siyaziqhenya ngomlando wethu oneminyaka engu-80, eyunivesithi yayo, abasebenzi bayo, sabo abaphothule zamanje nezesikhathi esizayo!
Ukwamukelwa 2016-2017 is open
Ukwamukelwa 2016 – one inundu kwesokunxele
Septhemba 2, 2016
Usuku of Knowledge
Poltava Ukraine Medical Dental Academy & yilona enyuvesi ehamba phambili wezokwelapha ngo Ukraine. Amakhulu abafundi angaphandle iza lapha ukuze ngifundele ubudokotela, Mbbs, ekhemisi, wobuhlengikazi amazinyo njalo ngonyaka.